Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Man City Oo Xiiseeneysa Nuno Mendes, Xisaha Eduardo Camavinga Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Man City oo Xiiseeneysa Nuno Mendes, Xisaha Eduardo Camavinga iyo Qodobo kale
July 20, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Mustaqbalka Jordan Henderson ee Liverpool ayaan la hubin, iyadoo wadahadalo qandaraas kordhin ah uu la leeyahay kooxda xili uusan hormar feecan sameenin kulamadii ugu danbeeyay ee kooxda. (Theathletic)
Chelsea ayaa ogaatay in ciyaaryahanka khadka dhexe ee West Ham United iyo England Declan Rice, oo 22 jir ah, uu doonayo inuu ku biiro, waxaana ay la xiriiri doonaan Hammers si ay u ogaadaan waxa ay ku qaadaneyso heshiiska. (express)
Dhanka kale, ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Chelsea ee reer England Callum Hudson-Odoi, oo 20 jir ah, ayaa sii joogaya inuu u dagaallamo booskiisa – taasoo soo afjaraysa rajadii uu ka qabay inuu u dhaqaaqo Bayern Munich iyadoo qeyb ka ah heshiis isdhaafsi ah oo loogu wareegayo garabka reer France ee Kingsley Coman, oo 25 jir ah (Sun)
Manchester City ayaa xiiseyneysa daafaca bidix ee reer Portugal Nuno Mendes, oo 19 jir ah, laakiin ma doonayaan inay la kulmaan 50 milyan oo ginni. (Fabrizio Romano)
Atletico Madrid ayaa ku adkeysaneysa in daafaca dambeedka midig ee England Kieran Trippier, oo 30 jir ah uusan iib aheyn iyadoo ay xiiseyneyso Manchester United – laakiin kooxda reer Spain ayaa ku badali doonta bedelka Wolves iyo daafaca midig ee reer Portugal Nelson Semedo, oo 27 jir ah, ama daafaca midig ee Napoli iyo Italy Giovanni. di Lorenzo, 27, haddii uu baxo. (AS)
Tottenham Hotspur ayaa wadahadalo horumarineed kula jirta daafaca dhexe ee kooxda Atalanta ee reer Argentina Cristian Romero, oo 23 jir ah (Football.London)
Arsenal ayaa weli ah koox ku jirta baacsiga ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Talyaani Manuel Locatelli, iyagoo diyaar u ah dalabka Sassuolo ee ahaa 34m – iyadoo 23-sano jirkaan uu doonayo inuu doorto Juventus sababo la xiriira xaaladdooda Champions League. (Mirror)
Daafaca dhexe ee Real Madrid iyo Faransiiska Raphael Varane, oo 28 jir ah, ayaa u furan inuu u dhaqaaqo Premier League, Manchester United ayaana kalsooni ku qabta in heshiiska shaqsiyadeed uusan wax dhibaato ah ku noqon doonin. (theguardian)
United ayaa ku sii dhawaaneysa inay dhameystirto heshiiska Varane. (Manchester Evening News)
United ayaa dooneysa inay u dulqaadato raacdada ay ugu jirto ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer France Rennes Eduardo Camavinga, oo 18 jir ah, iyagoo doonaya inay hoos u dhigaan lacagtaas. (theathletic)
Xiddiga qadka dhexe ee United Paul Pogba, 28 jir, Cristiano Ronaldo iyo weeraryahanka Paris St-Germain Kylian Mbappe, ayaa ka mid ah ciyaartoyda u dhaqaaqi kara beeca xorta ah xagaaga soo aadan madaama ay saameyn dhaqaale ku dhacday kooxaha doonaya xidigahan. (ESPN)
Everton ayaa xiiseyneysa garabka Burnley Dwight McNeil, 21 sano jiraka , heshiis ku kacaya 25 milyan oo ginni, laakiin tartan ayay kala kulmeysa Aston Villa . (Liverpool Echo)
Weeraryahanka Liverpool ee Nigeria U23-jira Taiwo Awoniyi, 23-jir, ayaa tijaabada caafimaadka u maraya Union Berlin ka dib markii labada koox ay ku heshiiyeen £ 6.5m. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Serbia Marko Grujic, 25, ayaa dhameystiraya heshiis 10.5 milyan ginni ah oo uu ugu wareegayo Porto. (Goal)
Barcelona ayaa loo soo bandhigay fursad ay kula soo saxiixan karto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United iyo Netherlands Donny van de Beek, oo 24 jir ah, iyadoo kooxda reer Spain ay u soo bandhigtay daafaca reer France Samuel Umtiti, oo 27 jir ah, taasoo qeyb ka ah heshiiska isdhaafsiga. (Express)
Da’yarka Chelsea Lewis Bates ayaa xiiso ka helaya kooxaha Liverpool, West Ham, Leeds iyo Southampton , iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe ee England U-19-ka uu hal sano uga harsan yahay qandaraaskiisa. (dailymail)